| | မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့သည် ယခုအခါ အင်တာနက် ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့် ဖေ့ဘုတ်များမှ တဆင့် အမှုအခင်း အချို့ကို တင်ပြလျက် ရှိသည် (ဓာတ်ပုံ – Reuters)
ရာဇာ November 13, 2012 - 3:17 pm တရားခံ တွေမိတာက ဟုတ်ပါပြီ…အရေးယူ ဘို့အစီအစဉ် ရောရှိရဲ့လား….တော်ကြာ ဘယ်သူ့ သားပါ..ဘယ်ဝါ့ သားပါ ဆိုပြီး အရေးမယူ ဘဲ လွှတ်လိုက်တာတွေက များနေတော့ ဒီတခါလဲ စောင့်ကြည့် ရအုံးမှာပေါ့….ကူညီပါရစေ ဆိုတဲ့ အဖွဲ့ကြီး ရေ…….
Reply pps12345 November 13, 2012 - 4:58 pm ရဲတပ်ဖွဲ့ဆိုတာ ဥပဒေအောက်မှာ မရှိပဲ လူတစ်စုကောင်းစားရေး ကို စောင့်ရှောက်ပေး နေရတဲ့ အဖွဲ့လို ဖြစ်နေခဲ့တာကြာပါပြီ။ အခုလို ပြည်သူကို လုပ်ဆောင်ချက်တွေ တင်ပြပေးတယ် ဆိုတာ အင်မတန် ကောင်းပါတယ်။ အထက်က ဘောင်းဘီချွတ်တွေ ကို လည်း ရဲဆိုတာဘယ်လိုတာ ပြဖို့လိုသလို ဥပဒေ အောက်မှာ နေထိုင်တတ်အောင် စောင့် ရှောက်ပေးသင့်ပါတယ်။
Reply snow November 13, 2012 - 8:09 pm အဲ့လိုမိန်းကလေးကိစ္စဖြစ်တိုင်းဝိုင်းရိုက်ကြတာ
Reply pnwara November 13, 2012 - 8:56 pm ထမိန်ခိုးတဲ့ ကလေ ကချေ သူခိုးဖမ်းမိလျှင် မောင်နီ (ဘ) ဦးဖြူ စသည်ဖြင့် ဘခင်ရဲ့ နာမည်ပါဖေါ်ပြလေ့ရှိပေမဲ့ -စံရိပ်ငြိမ် ရိုက်နှက်မှူမှာ ပါဝင်သူတွေ ဖမ်းတယ်ဆိုလို့ဖတ်ကြည့်လိုက်တော့ ဘခင် နာမည် မတွေ့ ရဘူး-ပြိုင်ကားစီးတယ်ဆိုတော့ အလယ်အလတ် တန်းစား လူမျိုးမဟုတ်လောက်ဘူး။ အကောင်ကြီးတွေရဲ့ သားသမီးတွေဘဲ ဖြစ်လိမ့်မယ်- ဒီတော့ အမှူဟာ တရားရုံးတောင် ရောက်ပါ့မလား မသိဘူး- ရဲစခန်းမှာဘဲ ပညာပေးပြန်လွှတ်မယ်ထင်ပါတယ်။
Reply true talker November 13, 2012 - 9:09 pm Every body knows that,who is behind the5family murders from Rose Bank (Sein le Kanthar), University Avenue Road, Rangoon. U Charlie and Family (Charlie is son of Mogoat U Mya Maung,the donor of U Wisara monument). So, how can this murder can take action ? Guess WHO ??????
Reply မြန်မာ တိုင်းရင်းသူ November 14, 2012 - 3:17 am လူ အစားထိုး မဖမ်းကြေးနော်။ တကယ် လုပ်ခဲ့သူတွေကို ဖမ်း အပြစ်ပေးရမှာ။
Reply မင်းခေါင် November 14, 2012 - 3:26 am စိမ်းလဲ့ကန်သာ ၅လောင်းပြိုင် လူသတ်မှုကို (အချိန်မဆွဲတော့ဘဲ) အဖြစ်မှန်ဖေါ်ထုတ်ပြီး ပြည်သူကိုအသိပေးပါ၊၊
Reply koko November 14, 2012 - 11:43 am ဟဲ့ကောင် တေတေနိပ်။သန်းရွှေဂျီး စိတ်ဆိုးလိမ့်မယ်
Reply Mon- Kayin November 14, 2012 - 12:40 pm့ ရဲကတော့ ကျွန်တော်တို့ ဒေသမှာတော့ ပြည့်တန်ဆာ လုပ်ငန်းတွေကို အားပြု